रित्तो भाडा सहित खानेपानी संस्थान घेराउ र तालाबन्दी
धरान । सुख्खायाम सुरु नभइ खानेपानीको अभाव भएपछि धरान–९ का उपभोक्ता आन्दोलित भएका छन् ।
सोमबार धरान–९ का उपभोक्ताहरु खानेपानीको सहज आपूर्तीको माग गर्दै ¥यालिसहित खानेपानी संस्थानको कार्यालयसम्म पुगेका थिए । विहान १० बजे अगाडी नै रित्तो भाडाकुडा सहित संस्थानको कार्यालय पुगेका धरान–९ का उपभोक्ताले नाराबाजी गर्दै कार्यालयको मुख्य ढोकामा २ घण्टा तालाबन्दी गरेका थिए ।
धरान(९ बगैचा लाइनबाट निस्किएको ¥याली भानुचोक, छाताचोक, लक्ष्मीचोकहँुदै संस्थानको कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरुले पानीको कृत्रिम अभाव बन्द गर, खानेपानीको सहज आपूर्ती गर, पानी जीवन हो खेलबाड नगर जस्ता नारा लगाउँदै खानेपानी संस्थानको कार्यालय पुगेका थिए । १० बजे अगावै संस्थानको कार्यालय पुगेका उनीहरुले नाराबाजी गर्दै गर्दा खानेपानी संस्थानका कार्यालय प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ कार्यालय आइपुगेपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्न पुगेको थियो । कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिइ उनीहरुले कार्यालयको मुख्य ढोकामा तालाबन्दी गरेका थिए ।
संस्थानको कार्यालय अगाडी भएको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष तथा खानेपानी संघर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर कटवालले खानेपानी संस्थानले पानीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको बताए । संस्थानले ट्याङ्करवाला र खानेपानी उत्पादक कम्पनीसँग मिलेर धरानमा पानीको कृत्रिम अभाव गराएको आरोप लगाए । संस्थानले खानेपानी सहज उपलब्ध नगराउन्जेलसम्मकोलागी वडाबासीले आन्दोलनको कार्यक्रम जारी राख्ने वडाध्यक्ष कट्वाले बताए । उनले खानेपानीको महशुल नतिर्ने अभियान वडाबाट सुरु गरिसकेको बताए । खानेपानी संस्थानले वर्षाैदेखि ९ नं. वडाबासीलाई काकाकुल बनाएको स्थानीइ कुमार कट्वालले बताए । उनले खानेपानी संस्थानले सुख्खायाम सुरु हुनु अगावै खानेपानीको कृत्रिम अभाव गराइ खानेपानीको व्यापार अन्तै गर्न संस्थानका कार्यालय प्रमुख लागेको आरोप समेत लगाए । उनले धरानको खानेपानी विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बेच्ने गरेको र पानी तान्ने पम्प विग्रेको भन्दै पानीको अभाव गराएको बताए ।
कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीकोलागी सहज आपूर्ती हुनुपर्ने भन्दै पिउने पानीकालागि नागरिक अभियानका अभियन्ता महेश श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकालाई खानेपानीको मुहानै मुहानले घेरेको भएपनि त्यसलाई चुस्त व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नगरबासी काकाकुल हुनुपरेको बताए । उनले धरानको उत्तरमा थुप्रै पानीका स्थायी स्रोत भएको र धरान दक्षिण चारकोषे जंगलमा ५ वटा कुवा खनेर धरानमा खानेपानी ल्याएको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न खानेपानी संस्थान असक्षम भएको बताए । उनले खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न सके धरानमा कहिल्यै खानेपानीको अभाव नहुने समेत बताए । धरानको बजार क्षेत्रमा पर्ने ९ नं. वडा ७ वर्षदेखि खानेपानीको चरम अभाव झेलीरहेको छ । खानेपानी नआएपछि ९ नं. वडाले पटक पटक खानेपानी संस्थानको ध्यानकर्षण गराउँदै आएको थियो । पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत खानेपानी नआएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको वडाध्यक्ष कटवालले बताए । यसअघि ९ नं. वडाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । उनीहरुले खानेपानी संस्थानको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नेदेखि, महशुल नतिर्नेसम्मको घोषणा गरेका छन् ।